Nyocha Ulefone Gemini | Smartphone nwere igwefoto abụọ na aluminom maka € 117 | Gam akporosis
Nyocha Ulefone Gemini, smartphone nke nwere igwefoto abụọ na ọnụahịa dị ukwuu
N'oge a anyị nyochaa Ulefone Gemini, ọnụ nke bụ nnukwu nzọ nke onye nrụpụta Ulefone maka 2017 a yana nke ahụ dịka anyị sirila gosi na ọ ga-enye ọtụtụ agha na mpaghara ahụ. Gemini bu ama nke maka naanị € 117 na-enye gị ezigbo mma imewe, aluminom ahụ y igwefoto abuo abuo Nke ahụ na - eweta nsonaazụ dị mma ọkachasị mgbe ọ na - agbagha agba nke abụọ.
1 Nice imewe na metal ahu
2 Ulefone Gemini ihuenyo
3 Njirimara teknụzụ nke Ulefone Gemini
3.1 Ulefone Gemini mpempe akwụkwọ data
4 Igwefoto Ulefone Gemini
5 Batrị, ibu na nha nke Ulefone Gemini
7 Uru na ọghọm
8 Ahịa na ebe ịzụta Ulefone Gemini
9 Ulefone Gemini Foto Osisi
Nice imewe na metal ahu
Dị ka anyị gosiri na mmalite nke isiokwu ahụ, atụmatụ nke Ulefone Gemini bụ otu n'ime ike ya. Ahụ ya bụ nke aluminom, nke na-egosi mmetụta nke ịdị mma na imetụ ya aka ya na nchacha ya na akụkụ ndị a gbara gburugburu na-eme nsonaazụ dị mma
N'aka aka nri ọ na - etinye oghere maka kaadị SIM na a bọtịnụ ụzọ ụzọ igwefoto nke na-arụ ọrụ nke ọma na nke nwekwara okpukpu abụọ dị ka shutter. N'akụkụ aka ekpe anyị na-ahụ bọtịnụ ọdịnala, nke na-agbanye na ngwaọrụ na njikwa olu. A na-ejikwa aluminom rụọ bọtịnụ niile ma rụọ ọrụ nke ọma ma nwee mmetụta mmetụ dị mma.
Akụkụ dị elu nwere naanị mputa mini-jack ebe nke dị ala nwere bọtịnụ ụlọ nke na-arụ ọrụ dị ka onye na-agụ akara mkpịsị aka, ntinye microUSB ụdị C na mbupụta igwe okwu ama.
Ọnụ ya bụ dị na agba atọ (isi awọ, ọla edo na oji) ha nile mara nma ma nwekwa ezi uto.
Ulefone Gemini ihuenyo
Ihuenyo nke Ulefone Gemini bụ 5,5 sentimita asatọ na mkpebi FullHD na njupụta nke 401 pikselụ kwa inch nke arụpụtara Sharp. Ọ nwere Corning ozodimgba iko 3 nchedo na kpochapụwo 2.5D arched na anya ọma na mobiles.
Naanị bọtịnụ dị n’ihu bụ HOME button / fingerprint reader ya enweghị bọtịnụ inyeaka nke na-adịkarị n’ọtụtụ ọdụ. Nke a bụ ihe uto, enwere ndị na-ahọrọ bọtịnụ inyeaka na-emetụ aka na ndị ọzọ na-ahọrọ ka ha tinye aka na ihuenyo ahụ, ọ masịrị m ka ha jikọtara ọnụ ka Gemini wetara ha.
Njirimara teknụzụ nke Ulefone Gemini
Ulefone Gemini tinye ihe nhazi Mediatek MTK6737 de quad isi na 1.5GHz a gụnyere ya na GPU Ogwe aka Mali-T720 MP2. Na larịị nke RAM na ROM ebe nchekwa, o nwere 3GB nke LPDDR3 Ram na esịtidem ebe nchekwa ROM nke 32 GB.
Na ọkwa nke data ndị a, ihe nchekwa ROM dị ka ihe dị mma ma e jiri ya tụnyere atụmatụ ndị ọzọ ama, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ị nwere ike ịgbasa ya ruo 256 GB site na iji kaadi microSD.
Ọnụ a dabara adaba maka iji ya mee ihe (ịntanetị, netwọkụ mmekọrịta, foto, email, egwuregwu ọkụ), ịgaghị atụ aro ka ị gbaa egwuregwu dị arọ nke na-achọkarị ike nhazi. Gemeni onwe ya nwere nwanne nwoke okenye nke aha ya bụ Ulefone Gemini Pro Ezubere ya maka ndị ọrụ ahụ chọrọ arụmọrụ dị elu.
Lọ ọrụ mmepụta ihe bụ A gam akporo 6.0 Marshmallow.
Ulefone Gemini mpempe akwụkwọ data
Akụkụ X x 15.40 7.68 0.91 cm
Agba "Nwa isi awọ Ọlaedo "
Ihe olu 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
Ihe olu 3G WCDMA 900 / 2100MHz
Ihe olu 4G FDD-LTE 800/1700/1800/2100/2600MHz
Typedị SIM Micro SIM
Ngosipụta teknụzụ «LTPS ihuenyo nke 5 5 sentimita asatọ na Corning ozodimgba iko 3 nchebe na mkpebi na 1920 x 1080 pikselụ (401ppp). Teknụzụ multitouch »
CPU MTK6737 Quad isi 1.5 GHz ọsọ
GPU Mali-T720 @ 600MHz
Ebe nchekwa RAM 3GB LPDDR3
Nchekwa ROM 32GB
SD oghere microSD ruo 256GB
Usoro njikwa Android 6.0 si na igbe
Rear igwefoto «13 MP + 5.0 MP sọrọ igwefoto na mmetụta Bokeh Ndekọ vidiyo aka na-elekwasị anya Ikanam flash na autofocus. »
Igwefoto n'ihu 5 MP (Nkọwapụta na 8MP site na ngwanrọ)
Puerto «Micro USB ụdị C obere Jack 3 5mm »
Ozi ndị ọzọ «Mkpisiaka nyocha ike ndọda kompas "
Ihe di n’igbe «1 x Ulefone Gemini 1 x USB USB 1 x nkwụnye ike 1 x Ntuziaka 1 x Ileba »
Asụsụ Dị n'asụsụ Spanish
Igwefoto Ulefone Gemini
Ma ugbu a, anyị na-aga na ike ọzọ nke Ulefone Gemini, ya Igwefoto azụ abụọ kpụrụ site 2 ese foto haziri iche iche ma na-arụkọ ọrụ ọnụ dị ka otu igwefoto iji mebie akụkụ nke ihe oyiyi (na-abụkarị ndabere) site na oghere iji gosipụta ihe na ndị mmadụ na-aga n'ihu, na-enye ohere maka foto ndị mara mma na nsonaazụ dị egwu. Banyere igwefoto abụọ a, onye isi nwere mkpebi nke 13MP mgbe ụlọ akwụkwọ sekọndrị nwere 5MP.
Na vidiyo gara aga ị nwere ike ịhụ ihe atụ nke ụdị foto anyị nwere ike iji mmetụta a mara dị ka Bokeh utịp.
Igwefoto n'ihu maka akụkụ ya nwere mkpebi nke 5MP ịgbasa ruo 8MP site na ngwanrọ, nke adịghị njọ kwa.
Batrị, ibu na nha nke Ulefone Gemini
Ama a na-etinye batrị dị n'ime nke na-enweghị ike iwepu 3250mAh na-adịgide adịgide ruo ụbọchị zuru ezu n'okpuru iji ya eme ihe.
Akụkụ bụ X x 15.40 7.68 0.91 cm ma tụọ ihe 185 grams. Obi abụọ adịghị ya na anyị anaghị eche ihu otu n'ime ọdụ ọkụ kachasị dị na ahịa, mana n'ihi eziokwu ahụ bụ na a na-ekesa ibu ha nke ọma, mmetụta nke ịnweta ọnụ na aka dị ezigbo mma.
Bara nnukwu uru maka ego
Nchekwa ROM dị ala
N'azu ruru unyi
Ahịa na ebe ịzụta Ulefone Gemini
Ugwọ nke Ulefone Gemini bụ € 117 na Nwere ike ịzụta ya ugbu a na nkwa niile site na ịpị ebe a. Ọ bụ ọnụ nke etiti etiti na ọnụahịa dị oke ọnụ Ọ na-enye anyị ụfọdụ atụmatụ mara mma maka ndị ọrụ ahụ adịghị mkpa igwu egwuregwu ọhụụ. Ọ bụrụ na ị jiri ekwentị gị sọfụ ịntanetị, gụọ ma dee ozi ịntanetị, jiri netwọkụ mmekọrịta na-agba ọsọ nke na-anaghị achọkarị ọ bụ oké zuo nhọrọ. Nhazi ya mara mma nke ukwuu, ejiri ọla mee ya ma nye gị otu igwe foto kachasị mma anyị nwalere na etiti.
Ulefone Gemini Foto Osisi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyocha Ulefone Gemini, smartphone nke nwere igwefoto abụọ na ọnụahịa dị ukwuu
Ndewo, onye ọ bụla maara ebe ị nwere ike ịzụta traktị kaadị SIM?
Ebe nchekwa ọhụrụ na-agbanwe agbanwe nwere ike ịchụpụ ihe okike nke smartphones na-agbanwe agbanwe
Ngwa kachasị egwu maka gam akporo